Madaxweyne Farmaajo oo culimada ka codsaday in ay sii xoojiyaan dadaalladooda kobcinta wacyiga bulshada – Kalfadhi
Madaxweyne Farmaajo oo culimada ka codsaday in ay sii xoojiyaan dadaalladooda kobcinta wacyiga bulshada
May 5, 2021 Hassan Istiila
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xalay Madaxtooyada Qaranka kulan afur ah kula qaatay qaar ka mid ah culimada Soomaaliyeed.
Mudane Farmaajo ayaa tilmaamay in dhibaatooyinka kala duwan ee dib u dhigay dalka lagaga gudbi karo wadashaqeyn buuxda oo ay yeeshaan shacabka, culimada diinta iyo Madaxda dowladda.
Madaxweynaha ayaa culimada ku bogaadiyey doorka wanaagsan ee ay ka qaataan wacyi gelinta iyo toosinta bulshada, dib u heshiisiinta iyo deminta colaadaha, isaga oo ku ammaanay kaalinta ay ka qaataan taakulaynta dadka danyarta ah iyo kuwa u nugul masiibooyinka dabiiciga ah.
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa culimada ka codsaday in ay sii xoojiyaan dadaalladooda ku aaddan horumarinta iyo kobcinta wacyiga bulshada, ayna hormuud u noqdaa xasilinta dalka iyo nabadeynta dalka.
Dhallinyaro ku amaanay Golaha Shacabka qaraarkii ay ku meel-mariyeen in dib loogu noqdo heshiiskii 17 Sep
Guddoomiyaha Baarlamaanka Puntland iyo Qunsulka Itoobiya oo ka wada-hadlay arrimaha ganacsiga iyo amniga